UMDLALO: UXWEBHU LWEXWEBHU LOPHONONONGO LWEXWEBHU - IINDABA
Uxwebhu 2 yinto elandelwayo eya kummemezeli we-West Coast we-5 yezigidi ezithengisayo. Ebonisa uKamva, uDrake, uKendrick Lamar, uGqirha Dre, kunye nabanye, iyaqhubeka nesicwangciso secwecwe kunye nezo zilandelayo: bamba uMdlalo kwelona nani likhulu lee-bandwagons kwaye ndiyathemba ukuba iyahamba.
Lo nyaka uphawule isikhumbuzo seminyaka eli-10 Uxwebhu , Oko kuthetha ukuba ikwayiminyaka elishumi yoMdlalo usikhumbuza ukuba wayekhe wabandakanyeka kwirekhodi ethengisa iikopi ezizigidi ezi-5. 'Ukubandakanyeka' nokuziva ngathi sisigama esifanelekileyo: Ngenxa yokuba iikhredithi zemveliso ndedwa Uluhlu lukaDkt.Dre, uScott Storch, uKhan West, uKupholisa kunye noDre, iHavoc, iBlaze nje, iTimbaland, iHi-Tek, uJeff Bhasker, kunye neBuckwild, kuya kuba kukulahlekisa kakhulu ukuthi uMdlalo 'wenziwe' Uxwebhu. Uzamile ukuguqula ukuwa kwakhe okhululekileyo emva koko ngokuzithemba, ukufuna ingqalelo, nokubiza i-LP yakhe entsha Uxwebhu 2 unokuba sisichotho sokugqibela uMariya: ukuba ubambisa ngento elungileyo kwirekhodi lakhe eliyimpumelelo kwinto engafaniyo ISLAMONI okanye I-R.E.D. Ialbham okanye Isiqwenga sikaYesu , ngekhe ibekho Uxwebhu 3 .
I-LP ezintathu zokugqibela zoMdlalo zaqala, ngokulandelelana kwi # 2, # 1, kunye # 5, nkqu nazo zonke ii-dud singles ezazifaka ikamva labo elihlazo kwikamva lokuqala lokumamela. Uninzi luya kuqaphela ukuba intle intle ukuqhuba zonke izinto eziqwalaselweyo, kodwa ezo albhamu zonke zalingiswa emva ko- * T ** yena uXwebhu- * hitch Umdlalo kwelona nani likhulu lee-bandwagons kwaye ndiyathemba ukuba iyahamba. Iyaqhubeka Uxwebhu 2 , Ebonisa uDrake, uKendrick Lamar, uKamva, kunye noKhan West. Kodwa ababonakalisi nyani okanye chemistry noMdlalo-ufana nomntwana osisityebi kwisikolo esiphakamileyo esinabazali abasoloko bekho ngempelaveki. '100', inqaku likaDrake, ngumdlalo wokuqala wetshathi engatshatanga ukusukela 'Umbhiyozo' Ngo-2013, kwaye kumnandi ukuva uDrake etshica enye yeendinyana zakhe ezinzima zika-2015 emva kokuvakala njengofileyo ehamba Leliphi Ixesha Lokuphila ; malunga nemizuzu emibini, uyalibala umdlalo uqobo kuyo, kwaye ngokubhekisele 'kuMula', uKyan uvakala ngathi ebengakwazi ukurekhoda eyakhe indima ngexesha elithathwayo ukubopha iperi yeRed Octobers.
Oyena mntu uphambili owayephila ngelo xesha ngubani yenza Isandi sonwabile ngokuba lapha nguKendrick, kwaye Uxwebhu 2 yeyona ilungileyo xa ikhumbula ukuba umdlalo ulunge kangakanani: ukwenza iirekhodi ze-gangsta-rap zaseNxweme oluseNtshona. Nokuba kusazwakala ngathi ufunda ukuhamba okutsha kubhabho, ukudlwengula kwi-albhamu yomdlalo kubaluleke kakhulu njengengxoxo Isantya ngomsindo Umboniso bhanyabhanya -ezona ndawo zihlekisayo azenzelwanga ukuba zibe ngabom, njengoko kunjalo ngamaxesha okubonisa iimvakalelo. Ulapha ukuze ubone iqela lama-dudes adumileyo adlala ngeethoyi ezibizayo. Oku kuhle kakhulu ekuphela kwenjongo 'yokuma kwiFerraris', ebonisa iDiddy kwaye imalunga nokuthembisa oko.
Kwakhona, uMdlalo ukwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo-ngunyaka olungileyo wokwenza irekhodi laseNtshona West, irekhodi le pop-gangsta rap. Ugqirha Dre wanika oku intsikelelo yakhe , ke asiyifumani ukuchitha kweMidlalo okufunekayo 50% ye Uxwebhu 2 okanye ucacisa ukungabikho kuka-Doc. Kwaye iqela lephupha eliqhelekileyo (uJahlil Beats, uMike WiLL Uyenzile, iBoi-1da, will.i.am, Hit-Boy, Inkulumbuso ye-DJ ) iphinda iphinde iphinde ibonakalise imveliso eluhlaza, yefilimu echaziweyo Ukunyibilika kwebhabhathane , Ubomi bam obuKrazy , kwaye ICompton -Mid-song beat switch, segues, kunye neesampulu ezibekwe kakuhle Uxwebhu 2 Isandi esinjengerekhodi ebicingelwe kwangaphambili endaweni yesiqhelo 'esingaphumelelanga singles + kunye neempawu zikaLil Wayne'.
Kodwa ukusukela Uxwebhu 2 inde kunamaxwebhu uqobo (ukungatsho nto ngebhonasi ezayo ye-LP Uxwebhu 2.5 ), Umdlalo unikwe igumbi lokuzama kuyo nayiphi na inombolo yesazisi: ukugqithisa ngaphezulu kwegazi (wayeza kusilungisa kwangoko esi sivakalisi b ompensating '), i-alpha eyonzakeleyo ye-emo-rapper eyenzakeleyo, enentsingiselo elungileyo kodwa engathandekiyo' Umdlalo oqondayo ngokwasentlalweni '. Intoni ayenzi ukuvela ngu * Gqwetha likaGqirha- * isitayile semidlalo yodwa; U-50 Cent waya ndibhengeze kulo nyaka naxa sele ekhankanyiwe, endaweni yokuya kudubula, uhlobo lomdlalo lunqwenela ukuba i-G-Unit ibuyisele iqela kwakhona.
Kukwanjalo ukuba uMdlalo ubonakalisa uthando oluninzi kangangoko- Uxwebhu 2 iyamomeleza njengomfundi ofunda i-hip-hop, enye enezixhobo ezininzi kunye nokuqhuba kunetalente yendalo, kodwa umfundi uyafana. Kulo nyaka, sibonile Ukungcola okungcolileyo 2 kwaye U-Fetty Wap Zombini iibhodi zeBillboard eziphezulu ezinesandi esinye, ii-singles zasesitalatweni, kunye ne-A & R'ing-ezi rekhodi zombini zithiwe amagama apha. Kodwa njenge Uxwebhu , lo mkhondo ungumboniso owonwabisayo kwisikolo esidala, ukwenza imali-mali, ukukholisa izihlwele, nokwenza-i-albhamu yehip-hop enokuba sisandi esikhulu, enokuthi ivakele inoveli ngo-2015. nayiphi na i-albhamu ayenzayo ngokuqinisekileyo iya kuba yeyokugqibela kuye. Awukwazi ukushiya i-rap yodwa-uMdlalo uyayidinga.
aretha franklin umhla wokukhutshwa kwefilimu
ndizoba yintombazana yakho
kukhokelele i-zeppelin umfazi welanga
iwiz khalifa kunye nohambo lwe-snoop dogg
UMichael jackson akazange abhale uxwebhu